Yintoni ebangela ukuba ibhlog enkulu ibemnandi? Zivelaphi iindaba ezingazithwaliyo iimbekiselo? Ngaba siziphethe kakuhle? | Iindaba zeGajethi
Yintoni ebangela ukuba ibhlog enkulu ibemnandi? Zivelaphi iindaba ezingazithwaliyo iimbekiselo? Ngaba siziphethe kakuhle?
Hoy yitshin ivula icandelo elitsha leFree Tribune ngomcimbi onempikiswano esele kuxoxiwe ngawo apha. Ezi ziingxaki ezivela iimbekiselo nanjengamaxesha amaninzi iibhloko ezinkulu zigubungela ezincinci ngenxa yabaphulaphuli bayo ababanzi.
Lokanye ezayo elandelayo inqaku elenziwe ngu yitshin de sidenge! kwaye inyani yokupapashwa apha ayithethi ukuba uyavumelana ngokupheleleyo okanye ngokuyinxalenye noko kuchazwe kuyo. Ndigcine uluvo lwam ukuze ndixoxe nawe kumagqabaza.
——— oo ———
Ndidiniwe ukubalisa amabali, kodwa le ndiyathemba ukuba izakuyivusa imvakalelo yakho ikuse uvuthondaba; Kuya kuba kufanelekile ukuyifunda kwaye usasaze ezindleleni nakubantu behlabathi; kwaye ukuba awukhathazeki, ungakhathazeki, xa uyifundile kuya kwanela. Yile ndlela zenzeke ngayo ezi ziganeko:
1.- ILacrax, ngo Iwebhu-Iingcebiso zeBlogger, shiya lo myalezo ngokoqobo, "Uncedo ndifuna ukupapasha iiposti malunga netekhnoloji"; Isofacto ndibhalisela ukukhupha "pang" yokubhala izinto ze-geeky -hehe- kwaye ndishiya ingxelo; ngexeshana elincinci sele ndongeziwe njengomdibanisi kwibhlog, ngokulula okubonelelweyo zebloga.
2.- Ndipapasha amanqaku am amabini okuqala geek: nge-3 kaDisemba: «25 imouse yobuchwephesha obuphezulu kule Krismesi» -iphefumlelwe Sizlopedia-Kwaye ngoDisemba 4: Qhuma i-iPod yakho! -Uphefumlelwe nguLifeHacker. Zombini zaphindaphindeka zivela kumthombo wazo "wokuqala"; emveni kokuba ndizipapashile, eyokuqala andikhumbuli ukuba ndiphi-kwaye ngo-00: 35 andiziva ndifuna ukukhangela- kwaye eyesibini ye-Alt1040. Ukuzijonga, bendikwazi ukuthi (ngaphakathi): Hee, ndibabethile!
3.- Ndifunde ngoDisemba 5 ngo Iikhompyutha ze-Tech (OTT) inqaku elinesihloko "Uyithumela njani i-imeyile ekhuselekileyo ngokufihliweyo simahla", (ngaphandle kokukhankanya "nge"), endathi emva kokuyifunda ndafumanisa kunomdla ukuyisebenzisa nokuyijonga kwakhona kwiWebhu ... ngesihloko esithi "Lockbin: kulawo maxesha" angaqondakaliyo. " Kwakhona ndiyamangaliswa kwaye ndikhukhumele ukubetha i-LifeHacker kuba ndifumana inqaku elifanayo le-OTT elipapashwe ngabo kusuku olulandelayo njengo "Thumela ii-imeyile ezifihliweyo ngokukaLokbin", kuphela ngeMakeUseOf.com (MUO), kodwa ngomhla we-4 kuDisemba! kwaye ngaphandle kokukhankanya "nge" oko kundenza ndicinge ukuba i-OTT iyazikopa, kodwa kunokwenzeka ukuba bobabini bayifumene i-imeyile evela kubaphuhlisi ukuvavanya inkonzo; Emva kokuphonononga, ndafumanisa ukuba iposti ye-MUO yi-OTT pinbak, kodwa eyokugqibela ayikhange ikhathaze ukuyicaphula.
4.- Kodwa umququ wokugqibela uza nini namhlanje, DISEMBA 7, IGenbeta phinda upapashe iindaba "I-Lockbin, ithumela ii-imeyile ezikhuselekileyo nezizimeleyo", nge I-DosBit (ngubani oyithumele ngo-Disemba 5), ​​nge Iindaba zeTekhnoloji que la esidlangalaleni kwangalo mhla. Ezi zokugqibela abathethi nge kananjalo, ukuba ibingonelanga, zibandakanya umfanekiso ofanayo we-MakeUseOf. Ndifuna ukucinga ukuba ngenxa yokuvela eGenbeta, inqaku liza kuphindwa kwezinye iindawo ezithetha iSpanish, kodwa ukuza kuthi ga ngoku-nge-7 kaDisemba ngo-1: 12 kusasa-khange yenzeke. (Hlaziya: kwangolo suku lunye, UArturoGiga ikwaphindaphinda iindaba ukuyithatha kwiGenbeta, kwaye, kwiintsuku ezingama-6 emva kwe-MUO, spamloco iyenza nayo).
Ngaphambi kokutsiba ukuya kwisiphelo ngokungxama - ukuba kufanelekile ukwenza - ndibonisa "ngokufutshane" umthi wosapho yeendaba ekuthethwa ngazo kunye a Uhlalutyo lwesimo yabaphindayo:
Emva kwamanqaku ama-4 angaphambili, imizobo emibini kunye neqela lamaqhagamshela, Ndiyaphetha ngokuthobekileyo:
-Kukho izinto ezintsha mihla le, kodwa kukho inani elikhulu labaphindayo zazo.
. Ukuba akukho tyala ukuphinda-phinda iindaba, into eyoyikekayo ayikokukhankanya umthombo uyithathaphi.
-Ukuba iiblogi ezinkulu zigqiba ekubeni ngabalinganiswa abaphambili besiphumo seendaba ngakumbi kunezo zisuka kuzo, kodwa Qaphela "ukutya" Ibazisile kwindawo abahlala kuyo.
-Ibhlog encinci inefayile ye- amathuba afanayo ukuba ube "ngumthombo ophambili" kwabanye abasetyenziselwa ukuyifunda kunebhlog enkulu.
5.- Yintoni Iindaba zeTekhnoloji ayingomthombo wokuziphatha ukuba "bathathe" iindaba kuba abayichazi imithombo yabo kwaye bazinikezele ekukhupheleni nasekuncamathiseni, nangona bephakathi kwelokuqala kwikhonkco lokugcina ikopi laseSpain- yeyona nto igqwesileyo yokugcina iindaba kuba akukho mntu ukhathalela ukushiya izimvo kumangenelo .-
Kwaye ke, ngentobeko enkulu Ndikucebisa:
- ukuba ufuna ukwaziswa, funda i-MakeUsOf ...
b.- Ukuba ufuna ukuphola, funda iTech News ...
c.- Ukuba ufuna ukufumana okokugqibela, funda uGenbeta ...
PD1. INKOSI YOKUZIBEKELA UMNTU OLUFANELEKILEYO.- ukwenza umkhondo weendaba ezingafunekiyo, ndifumanise ukuba ireferensi yokuqala ekhoyo kwiwebhu yale nkonzo ikwi IiWebhu Okthobha 18 ... ewe, phantse iinyanga ezimbini ezidlulileyo. Kwaye ngubani owayene-scoop yokunyanzela umcimbi ukuba ube Geek Point, Kwiintsuku ezi-4 kamva.
PD2. Kukuthini ukubeka! Ukuba ngoku uchwetheza kwifayile yakho ye- Uphando "I-Lockbin" uyakufumanisa ukuba iphepha lokuqala eliphosiweyo, ewe, lelo lenkonzo, kodwa elesibini ngu… uqikelele ekunene!, Genbeta. IPunto Geek ikwindawo yesi-5 engacingekiyo emva kweDosbit kwaye, uyifumene kwakhona, ArturoGoga.
BKulungile olu yayiluluvo luka yitshinNdiyathemba ukuba kumagqabantshintshi uyakubonisa ukuba awuvumelani naye okanye ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye wabelana ngokuqiqa kwakhe. Sele uyazi ukuba unayo isithuba sokubonisa ukungoneliseki kwakho okanye uxele nawaphi na amava amabi ahambelana nebhlogosphere. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Yintoni ebangela ukuba ibhlog enkulu ibemnandi? Zivelaphi iindaba ezingazithwaliyo iimbekiselo? Ngaba siziphethe kakuhle?
Izimvo ezi-8, shiya ezakho
yenzayo 14 iminyaka
Molo Vinegar, bendilandela ibhlog yakho kutshanje, ndiyifumana inomdla kakhulu, kodwa oku kungena kuthatha ibhaso.
Inyani yile, ndiyathanda ukuba umntu aqonde okwenzekayo ngamanye amaxesha, jonga, ayisiyonto ilize, kodwa kukho ibhlog evela ku-Ajaxhispano (yi .com ngaphandle kwesikripthi), esidibanisa neAjaxian, nangona kunjalo andiboni nto Inomdla ukuba ayifumani kwenye, kwaye iGoogle ibonakala kwindawo ye-7 kunye nebhlog yam, ivela kwindawo ye-12, kodwa ndineencwadana ezilungileyo (ndizithatha njengezi) ezifaka isandla kakhulu.
Kwaye enye into, xa ndibona kamva izithuba ezivela kwiiblogi ezininzi, ezingazange zikhankanye ireferensi enye, ngaba oku kuyasebenza?
izinto zinokuthethwa ngaphandle kokukhankanya imithombo yolwazi xa umntu engenguye umphandi.
Enkosi ngokundivumela ukuba ndikhuphe imibuliso yeVinegar.
Inqaku elihle kanjani. Ukulandelwa kweendaba ezilungileyo kakhulu.
Igama lebhlog lindenze ndahleka intsasa yonke. Zintle !!
Ndikwacinga ukuba i-victormx ilungile, umxholo unomdla kakhulu kwaye mininzi imizekelo.
Xa ndigqabaza ngale nto uyithethayo kwiKabytes, bendicinga ngale posi apho bendicaphula khona i-MakeUseOf kwaye ibingathi uyandiphikisa ... kodwa ke, yenzekile kanjalo, yonke loo nto yayiqondana. Umcimbi kuxa isiba sisiqhelo semihla ngemihla ... apho iba yinto ekrokrisayo ngakumbi.
UAseem Kishore sitsho
Kutheni ungasusa uluvo lwam?
Phendula ku-Aseem Kishore
Into oyithethayo yinyani, baninzi abantu abathetha ngento enye kwaye ii-greats zidlala ngoncedo.
Umbulali weviniga sitsho
IAjaxman ayinakuphepheka namhlanje ukuba kukho abantu abahlala bethumela ngaphandle kokukhankanya imithombo. Ndonwabile ukuba uthathe isigqibo sokubeka izimvo kwaye unayo ibhlog enezinto ezinomxholo, mhlawumbi kuya kufuneka ufunde ngakumbi ngeendlela ze-SEO zokusebenzisa eli thuba kwaye ubeke kwinqanaba elingcono. Konke okugqibelele.
SpamLoco kukho ingcaciso yakho, inyani kukuba ngolangazelelo izolo ndifunde uluvo lwakho, andikhumbuli ngoku ngebhlog, apho ukhusele khona ukuba umthombo waseMelika akufuneki unxulunyaniswe ukuze ubonakale "upholile" (andikhumbuli intetho yakho , uxolo) xa ifundwa iindaba ngeSpanish. Ndibambe ingqalelo yam kuba i-victormx ikukhankanyile kwinqaku kwaye kwenzeka ukuba unxibelelana nomthombo welinye ilizwe xa kwiintsuku ngaphambi kokuba iibhlog ezininzi zaseSpanish zipapashe into efanayo.
Ndiyathemba ukuba awundivi phosakeleyo, ndisitsho nje ukuba indibambe ngengozi, ngakumbi bendicinga ukuba uyifunda ngesiNgesi.
Ndiyakholelwa ukuba i-victormx ilungile entliziyweni, kodwa mhlawumbi akayikhethanga kakuhle le mizekelo kuba akukho bungqina bubonisa ngokuthembekileyo ukuba ngubani owakhuphele nabani, ukuba ikopi ikhona.
Enkosi nobabini ngokuveza izimvo zakho. Konke okugqibelele.
Phendula kuMbulala Vinegar
Inyani yile yokuba andiqondi okuninzi malunga nesihloko, kuba ndimtsha kakhulu kule nto kwaye andinayo ibhlog yabantu abaninzi ukuba bayifunde, kodwa ndinayo, ixesha.
Ndicinga ukuba uhlala ubeka indawo apho ufumana khona izinto, kuba yiyo ehambelana nokunikezela ngetyala kulowo uyibhalileyo, okanye kulowo uthathe ixesha lokuyiguqulela, kwaye ubone ukuba indawo ivela phi uyifumana ibhekisa kwenye okanye ufele phaya. Ukuba ifela apho, ngumbuzo wokubeka ibinzana elivela kwisicatshulwa kwiinjini zokukhangela ukubona ukuba siyifumana kumthombo wokuqala okanye umntu okopa, kwaye ekugqibeleni acacise kwimithombo yethu okanye abeke ngaphezulu komthombo omnye. ..
Oku ngakumbi, ukuba unjengam, vele ubeke inqaku kuba ulithandile kwaye awuhlalutyi umxholo okanye nantoni na kwinqaku kakhulu. Ngokunjalo, ndihlala ndikopa iingoma kunye nemibongo eyaziwayo kwihlabathi liphela, ke nangona ndingakhankanyi mithombo, wonke umntu uyazi ukuba andiyibhalanga ngengozi ^^
Njengokuba bendikuxelele, apha eArgentina yonke into iluhlaza kangangokuba ndicinga ukuba ezo zinto azithathwa njenge ^ ^
imibuliso, intyatyambo encinci = D
Lukho uluvo lwakho ntombazana yeentyatyambo. Konke okugqibelele.
IVirustotal.com ihlalutya iifayile ezine-antivirus ezingama-32 ezahlukeneyo, kwi-Intanethi, simahla nakwiSpanish
Shintsha iphasiwedi ye-hotmail. Ungayitshintsha njani iphasiwedi kwiWindows Live Hotmail